Ndeipi nzira dzokuwana WordPress backlinks?
Backlinks dzinozivikanwawo sezvikwata zviri mukati kana kupinda. Izvi zvinosangana pane imwe peji yewebhu asi rinongedzera kune rimwe. Nokusimudza nhamba yehukama huripo, uri kusimudza nzvimbo yako mukududzirwa. Ndicho chikonzero nei iri nzira yakakwana yekuwedzera migwagwa yebhuku rewebhu uye inoita kuti zvizivikanwe pakati pevashandisi. Nhamba uye hutano hwemashure endangariro ndeimwe yezvinhu zvinonyanya kukoshesa zvinhu zveGoogle. Ndicho chikonzero backlinks dzinoshandiswa neve webmasters kuwedzera mawebsite panzvimbo yepamusoro uye kuita webhusaiti pane SEO-friendly. Kana nzvimbo inotaridzwa nechekare backlinks, zvinowanzosvitswa nevashandisi.
Ndezvipi zvikonzero zvekupa WordPress backlinks?
Kuwanda kwehutano uye hutsika hwemashure endangariro chinhu chinokosha mukutsvaga kwekutsvaga injini. Kunyoreswa kwekunze kune zvimwe zvinobatsira mukushandura webhusaiti kuburikidza nekukwevera vashanyi vatsva kune imwe nzvimbo uye nekuwedzera kwemotokari kumapeji ako ewebhu. Vanoita basa rinokosha mukusimudzira nheyo yevateveri nekusimudza mazita ekuzivisa. Uyezve, kuwirirana kwakanyanya kunobatsira mupfungwa yokuti inovandudza nzvimbo yekushanda kwekushanda uye inobatanidza nzvimbo yacho kune mamwe manyorero.
Ungawedzera sei backlinks ku WordPress?
Webmasters avo vanotanga nzvimbo dzakasiyana-siyana dzewebhu kubva panguva imwe chete vanogona kushandisa zvakakwana backlinks kuti vasanganise imwe nheyo. Iyo inzira yakakwana yekuwedzera mutengesi kune mamwe mawebsite. Zvisinei, vamwe vanoita webhusaiti vanonzwa vakavhiringidzika pakugadzira backlinks zvakanaka. Ndicho chikonzero tinounganidza mamwe mazano anobatsira achakubatsira kuvaka zvikomborero zvakanaka paShokoPress:
Shandura backlinks nedzimwe nzvimbo
Nzira yakanakisisa uye yehupenyu kuumba zvakakodzera backlinks ndekutsinhanisa navo nedzimwe nzvimbo. Iwe unogona kungosangana ne webmaster mu niche yako uye simbisa pamwe naye hukama hunobatsira. Iwe unogona kumukumbira kuti aise backlinks yako panzvimbo yake nehutano iwe uchaita zvakafanana kwaari kubva kune yako. Iyi kukunda-kukunda nzira yakakodzera iwe newawakaroorana naye webhusaiti.
Zvakakosha kuzivisa vatengi vako vangave pamusoro pevhangeri yako uye kuchinja mubhizinesi rako. Iwe unofanirwa kugovera ruzivo urwu kwenguva pfupi uye kuomesa uye uhuparidzire kune mamwe masangano ekubudisa-kusununguka. Zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa zvakanyatsokwanisa zvakabudiswa nemamwe emakwikwi makuru ezvinyorwa zvinogona kukupa iwe somunyori ane backlinks pasina.
Chimwe chinhu chinokonzerwa nekuvaka zvikwangwani ndechokunyora uchapupu hwezvinhu kana zvivako zvaunoonga zvikuru. Kana zvipupuriro zvako zvinosangana nemitemo inodiwa, inogona kuiswa pawebsite. Somugumisiro, munyori achawana zvakakosha kumashure. Zvichemo zvekugadzirisa zvine hukama kune vanyori vanovasika uye vanoita uchapupu huri chokwadi.
Shandisa social media channels
Unogona kuwana zvikwereti kuburikidza nekushandisa shanduro dzakadaro dzemasangano se Twitter, Facebook, Twitter, Google+ nevamwe. Iwe unogona kuumba pano bhizinesi rako rebhizinesi uye wobva wawedzera hukama kune iyo inotaridzira webhusaiti yako. Kuti ukweve vazhinji vanogona kutenga vatengi, unoda kuramba uchipa vatengi vako zvinhu zvitsva uye zvakakosha uye pamwe nepareaways dzakasiyana, makwikwi, mavhidhiyo, uye infographics Source .